नराम्रो सपना देख्नुभयो ? चिन्तित नहुनुहोस् यी उपाय गर्नुहोस् नष्ट भएर जान्छ नराम्रो सपना ! – Sandesh Press
बलिरहेको दियोको साथमा भगवान प्रकट भएको देख्नु : यदि तपाइले सपनामा भगवान देख्नुभयो भने अथवा बलेको दियो देख्नुभयो भने यो तपाइको लागी धेरै शुभ हुने गर्छ। यसरी सपनामा बलिरहेको दियो देख्दा यसले तपाईको जीवनमा नँया-नँया किसिमका अवसरहरु प्राप्त हुँदै जाने संकेत दिन्छ । यसको साथमा तपाइले कुनै देवि देवता प्रकट भएको देख्नुभयो भने पनि तपाईको जीवनमा निकै ठूलो सफलता मिल्नुको साथै यसले सदैव तपाइको जीवनमा खुशीयाली छाउन सक्छ। त्यसैले यी सपनाहरु तपाइले कसैलाई नभनेको नै राम्रो हुन्छ । यस्तो सपना अरुलाई भन्दा यसको प्रभाव कम हुँदै जाने विश्वास गरिन्छ
Nextदुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित)